admin, Author at Khabarshala admin, Author at Khabarshala
तुलसीपुर । जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएको अन्तिम वर्षमा केही नमुना परियोजनालाई मुर्तता दिनका लागि नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको दौडधुप सुरु भएको छ । नगर प्रमुखका रुपमा उनले विभिन्न नमुना परियोजना सुरु गरेको थिए ।
सबै परियोजनालाई यो वर्ष पुरा गर्ने गरी वजेट विनियोजनका लागि उनी मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा दौडधुप सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहको बजेटले ठूलाखालका परियोजना निर्माणमा कठिनाई हुने भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
उनले बुटवलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलदेखि ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री हरी प्रसाद रिजाल,उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेय लगायतलाई विभिन्न योजनाका लागि माग पेश गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ । तुलसीपुरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्नका लागि यसै वर्ष संघीय सरकारले ९ करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा पनि आन्तरिक मुल्यांकनबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मुल्यांकन विधि अनुसार गर्ने निर्णय पारित गरेको हो ।
बैठकमा सहभागि एक मन्त्रीले भने, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । कोरोना महामारी झन बढ्दै गएकाले उनको प्रस्ताव अनुसार नै बैठकले निर्णय गर्यो ।’
यस्तो छ यसपालिकाे बजेट (पूर्णपाठ)
तुलसीपुर । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको २२. ७ प्रतिशत हो।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात १२.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने रकम ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात २३. ५ प्रतिशत रहेको छ।
विनियोजन गर्ने खर्च रकममध्ये राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड जुटाइने पौडेलले बताए।
नपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइने छ। जसअनुसार ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिकबाट उठाइने उनले बताए।
बजेटमा दाङ : तुलसीपुर स्मार्ट सिटीदेखि विमानस्थलसम्म
तुलसीपुर । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएकाे छ । विभिन्न लाेकप्रिय कार्यक्रम समेटेकाे सरकारले बजेटमा दाङका विभिन्न याेजना पनि समेटेकाे छ । विशेष गरेर बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रीत रहेकाे देखिन्छ ।
बजेटमा तुलसीपुर स्मार्ट सिटीदेिख नारायणपुर बिमानस्थलसम्मलाई समेटिएकाे छ ।
बजेटमा समेटिएका दाङका योजनाहरु :
१ पड्कापथ, प्रगन्ना सिचाई आयोजना
२ दाङलाई कागती जोन बनाउने
३ नौमुरेको डिपीआर
४ माडी दाङ डाइभर्सनको बिस्तृत प्रतिवेदन
५ राप्ती नदी नियन्त्रण
६ दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगीक क्षेत्रको सम्भाव्यता
७ दाङको लमहीस्थित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि बजेट
८. तुलसीपुर स्मार्ट सिटि
९ दाङको नारायणपुर विमानस्थल निर्माण
१० दाङको हेमन्तपुरस्थित रेडियो नेपालको ट्रान्समिटरको क्षमता बृद्धि गर्ने ।
छाती पोल्ने, पेट कराउने, पेट घोच्नेजस्ता लक्षण देखिनासाथ हामी जो कोही पनि भनिहाल्छौं मलाई ग्याष्ट्रिक भयो ।
बोलचालमा ग्याष्ट्रिक भनिने ग्याष्टाइटिस अर्थात एसिडिटीलाई चिकित्सा विज्ञानमा ‘हाइपरएसिडिटी’ भनिन्छ ।
हामीले महसुस गरेजस्तै छाती पोल्ने, पेटमा ग्यास भरिने, पेट घोच्नेलगायतका लक्षणबाट एसिडिटीको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हामीले खाएको खाना पाचनका निम्ति पेटका कोसिकाहरुले हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पादन गरिरहेको हुन्छ ।
यो उत्पादन चाहिने भन्दा बढी भएमा पेट र छाती पोल्ने लक्षणहरु देखिन्छ । कसै कसैको मुखमा अमिलो पानी आउँछ र मुटु नजिकको भाग पोल्ने वा दुख्ने लक्षण पनि देखिन्छ ।
उत्पादित एसिड हाइपरएसिडिटी खानाको नलितिर वग्न थाल्दछ,जसलाई एसिड रिफ्लक्स वा रिगर्जीटेसन भनिन्छ ।
साधारणतया एसिडिटी कुनै रोगले भन्दा खानाकै कारणले हुन्छ । बढि चिल्लो, पिरो र गह्रौ खाना खानाले शरिरको पाचन प्रणालीमा सहयोग पु¥याउने डायजेस्टिभ जुस, हाइपरएसिडिटीको कार्यक्षमता र स्थिरता बिगार्छ र यस्तालक्षणहरु देखापर्न थाल्छ ।
खाली पेटमा केही विशेष औषधिहरुको सेवनले पनि एसिडिटी बढाउछ । मध्यपान, धुम्रपानको अत्यधिक प्रयोग र लामो समयसम्म भोको वस्नाले एसिडिटी गराउने संभावना बढ्छ ।
गर्भावस्था, बुद्ध अवस्था, मोटोपन र चिन्ता लिइरहनाले यसको संभावना बढी हुन्छ ।
त्यसबाहेक एसिडिटीको अन्य कारण पनि छन् ।
आन्द्रा सम्बन्धी रोग
हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामक व्याक्टेरियाको संक्रमण
क्याल्सियमको बढी सेवन
रोकथामका घरेलु उपायहरु
बिहान दैनिक २/३ गिलास पानी पिउने ।
दैनिक तुलसीको पात सेवन गर्ने ।
खाना पहिला मह र भेनेगर जुसको सेवन गर्ने
चिसो दुध, नरिवलको पानी, बदाम, लसुनको सेवनले पनि ग्याष्ट्रिक रोकथाममा मद्दत गर्छ।
एसिडिटी घटाउन ल्वाङ चुस्नु अति फलदायक
काँचो फल नखाने
पुदिना मुलेठी भएका हर्वल चियाको सेवन गन
राति सुत्ने समयको कम्तिमा २ घण्टा अघि खाना खाइसक्ने
एसिडिटीमा दही फाइदाजनक हुन्छ
सुत्ने र उठ्ने समय नियमित गर्ने
सबै पालिकालाई सेवा दिदै तुलसीपुर आईसाेलेसन
तुलसीपुर । कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्नका लािग तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बनाएको ५० बेडको तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालले दाङ्गका सबै पालिकाका संक्रमितहरुलाई सेवा दिइरहेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको भएपनि अस्पतालले अहिले सबै पालिकाका बिरामीहरुलाई सेवा दिइरहेको नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए ।
“अन्य पालिकामा पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा हामीले सहयोग गरिरहेका छौ ” उनले भने ।
अस्पतालले हालसम्म दंगिशरण गाउँपालिकाका ६ जना, कपुरकोट,कालिमाटी र छत्रेश्वरी गाउँपालिका सल्यानका ५ जना , शान्तिनगर गाउँपालिकाका २ जना, बबई गाउँपालिकाका २ जना र घोराही उपमहानगरपालिकाका १ जनालाई सेवा दिइसकेको कोभिड फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिए ।
उनले अस्पतालबाट हालसम्म १ सय १३ जनाले सेवा लिएको समेत बताए ।